အင်္ဂလိပ်စာသင်ယူသူများ၏ အဓိကပြဿနာများအကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း - Myanmar Network
Posted by Betty on April 1, 2016 at 14:34 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
အင်္ဂလိပ်စာသင်ယူသူများအတွက် အကြီးမားဆုံးသော ပြဿနာမှာ အင်္ဂလိပ်စာမှာ တိုးတက်မှုသိပ်မရှိသေးဘဲနှင့် (သို့) အင်္ဂလိပ်စကား ကို သွက်သွက်လက်လက်နဲ့ လွယ်ကူစွာ ပြောနိုင်အောင် မကြိုးစားပါဘဲနှင့် အင်္ဂလိပ်စာကို ဆက်လက်သင်ယူနေခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
သူတို့က ကြားရသော စကားလုံးများကို နားမလည်ပါဘဲနှင့် podcast များကို နားထောင်ကြသည်။ အင်္ဂလိပ် ဝေါဟာရ ပိုမိုရရှိရုံအတွက်နှင့် သူတို့မနှစ်သက်သော စာအုပ်များကို ဖတ်ကြသည်။ YouTube ဗီဒီယို များတွင် ဆရာ/ဆရာမများက အသုံးပြုသော စကားပရိယာယ် ကဲ့သို့သော နည်းပညာများကို အားကျကြသော်လည်း ဒီနည်းပညာတွေကို သူတို့ရဲ့ လေ့ကျင့်မှုတွေမှာ မစမ်းသပ်ကြည့်ကြပါ။ သူတို့သည် ၄င်းစကားတွေကို ကြိုးစား၍ လိုက်မပြောကြပါ။ ၎င်းအစား သူတို့ကြိုက်သော သင်ခန်းစာများ၊ ဗီဒီယိုများအောက်တွင် အောက်ပါမှတ်ချက်များကဲ့သို့ comment များ ရေးရသည်ကို ပိုကြိုက်ကြသည်။
Teacher, thank you very much. (ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်ဆရာ)
This is really great. (ဒါဟာတကယ့်ကို ကောင်းပါတယ်)
Now, can you tell me, please, how can I speak likeanative speaker? (အခု ကျွန်တော့်ကို native speaker တစ်ယောက်လို ပြောနိုင်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ ပြောပြနိုင်ပါသလား)
ဤသို့သော comment များကို feedback ပေါ်တွင် အကြိမ်မရေမတွက်နိုင် သင်တွေ့ပြီးသားဖြစ်နေမှာ သေချာသည်။ နောက်ဆုံးတော့ မရေမတွက်နိုင်သော အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းများတက်ပြီး၊ YouTube ဗွီဒီယိုများစွာ ကြည့်ပြီးနောက် သူတို့ ထမင်းစားရေသောက် ပြောလို့ ဖြစ်သွားသည်။ သို့သော် လည်လည်ပတ်ပတ်ပြောနိုင်ဖို့က မနီးစပ်သေးပါ။ ထို့ကြောင့် အောက်ပါ ကဲ့သို့သော မေးခွန်းများကို လူမှုကွန်ယက်များတွင် ဆက်မေးနေကြပါသည်။
How can I speak likeanative speaker? (Native speaker တစ်ယောက်လို ဘယ်လိုပြောလို့ရမလဲ။)
How can I become fluent in English? (အင်္ဂလိပ်စကားကို ကျွမ်းကျင်အောင် ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ။)
ဒီအမေးတွေရဲ့ အဖြေမှာ ရှင်းသည်။ မည်သူမဆို အောက်ပါ အချက် ၂ ချက် အတိုင်း ပြုလုပ်ပါက ဘယ်ဘာသာစကား၌မဆို ကျွမ်းကျင်စွာပြောနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
၁။ နေ့စဉ်ဘ၀ရဲ့ ဆက်သွယ်ရေးမှာ အသုံးပြုခြင်း
၂။ Native speaker များ၏ ရေးသားပြောဆိုချက်များတွင် ပါဝင်သည့် သဒ္ဒါ၊ စကားစုတွေ၊ လေယူလေသိမ်း စသည်တို့ကို မည်သို့ အသုံးပြုရမည်ဆိုသည်ကို လေ့ကျင့်အတုယူခြင်း
တစ်နည်းအားဖြင့်ပြောရလျှင် သူတို့သည် အင်္ဂလိပ်စာသင်ယူသူများအဖြစ်ရပ်တန့်ပြီး အင်္ဂလိပ်စကားကို လက်တွေ့ ပြောဆိုသူများဖြစ်ရမည်။ စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြရုံသက်သက်မဟုတ်ဘဲ အမှန် တကယ်လက်တွေ့ကျကျလုပ်မည် ဆိုလျှင် လအနည်းငယ်အတွင်း ကျွမ်းကျင်မှုကို ရရှိနိုင်အခွင့်အရေးများမည် ဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်စကားနှင့် မြန်မာစကားအပါအ၀င် ဘယ်ဘာသာသင်ယူခြင်းတွင်မဆို အဓိက ပြဿနာသည် မှန်ကန်သော အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့် စိတ်ဓာတ်လှုံ့ဆော်မှုတို့ သာဖြစ်သည်။ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုနှင့် သင့်လျှော်သော ပတ်ဝန်းကျင်မရှိခြင်းတို့ မဟုတ်။
အင်္ဂလိပ်စာသင်ယူသူများအတွက် နောက်ထပ် ပြဿနာတစ်ခုမှာ စာသင်သားများ လုံလောက်သည့် အမှားပြင်ဆင်ပေးမှုမရရှိခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ဘာသာစကားအသစ်တစ်ခုကို အသုံးပြုသည့်အခါ ပြောဆိုလိုက်သည့်အခါတိုင်းနီးပါးတွင် အမှားပါသည်။ သင်နှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေသော native speaker များနှင့် native speaker မဟုတ်သည့် ကျွမ်းကျင်သူ က ၎င်းအမှားအားလုံးကို ပြင်ပေးရန် ကြိုးစားမည်မဟုတ်။ အချိန်မရလို့ ဖြစ်စေ၊ ရိုင်းတယ်လို့ ထင်မည်စိုး၍ပဲ ဖြစ်စေ (သို့) အမုန်းမခံလို၍ ဖြစ်စေ အင်္ဂလိပ်ဘာသာကို မိခင်ဘာသာအဖြစ် ပြောသူများ သင်၏ အမှားကို တွေ့ သည့်အခါ မပြင်ပေးကြပါ။ ကျွန်တော်သည် ဘာသာစကားတစ်ခုခုကို သင်ယူနေပါက မည်မျှ သေးငယ်ပါစေ ကျွန်တော်ပြုလုပ်သည့် အမှားတိုင်းအား ထောက်ပြသည်ကို လိုလားသည်။ သို့သော် လူတိုင်း ဒီနည်းဖြင့် သင်ယူလိုချင်မှ သင်ယူလိုမည်။ native speaker များက ကျွန်တော်၏ ဘာသာစကားအသုံးပြုပုံကို သည်းခံနေပါက ကျွန်တော့်အနေနှင့် အမှားကို အမှန်ယူဆပြီး ကျွန်တော်က native speaker တစ်ယောက်မဟုတ်ကြောင်းကို ဖော်ပြနေသည့် "ဖော်ကောင် လက္ခဏာ" များ ကျွန်တော့၏ ရေးသားပြောဆိုမှုတွင် အမြဲရှိနေမည် ဖြစ်သည်။
နှစ်ပေါင်းများစွာ အင်္ဂလိပ်စာသင်ယူခဲ့တဲ့ "ဒုတိယဘာသာစကား" သင်ယူသူတစ်ဦးမှလည်း ၎င်းတွင် ပြဿနာကြီး (၂) ရပ်ရှိသည်ဟုထင်ကြောင်း ပြောသည်။
ပထမ ပြဿနာမှာ ၎င်းသည် အချိန်တိုင်းတွင် အင်္ဂလိပ်စကားကို ပြောဆိုသုံးစွဲ နေသည်မဟုတ်။ အင်္ဂလိပ်စကား သင်ယူရန်အတွက် တစ်ပတ် စာသင်ချိန် (၄) ချိန်ထက်ပိုယူသော်လည်း အချိန်အများစုတွင် မိခင်ဘာသာစကားကိုသာ သုံးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အတန်းထဲမှာ သင်ယူခဲ့သည်တို့ကို အလွယ်တကူ မေ့သွားသည်။
ဒုတိယပြဿနာက “ယဉ်ကျေးမှု” ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော့်အား ဆရာတစ်ဦး တစ်ခါက ပြောဖူးသည်ကို အမှတ်ရနေပါသည်။ ကျွန်တော့်၏ အင်္ဂလိပ်စာ သင်ယူမှုလုပ်ငန်းစဉ်မှာ အခက်အခဲဆုံးသော အရာသည် 'အမေရိကန် (သို့) ဗြိတိသျှ ဟာသဉာဏ် - Armerican or British humour' ဖြစ်သည်ဆိုခြင်းပေ။ ဒါကြောင့် စာအုပ်တစ်အုပ်ထဲက စကားလုံးတိုင်းကို သိသော်လည်း ထို 'ဟာသဉာဏ်' မရှိသောကြောင့် အထေ့အငေါ့ အတိမ်အနက် အကွေ့အဝိုက်များအား သဘောမပေါက်နိုင်သေးသည်မှာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထပင် ဖြစ်သည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ဒုတိယဘာသာစကားကို သင်ယူခြင်းသည် အမှန်တကယ် ခက်ခဲနက်နဲသည့် အလုပ်ဖြစ်သည့်အတွက် အလေးထား ကြိုးစားရန်လိုသည်။
Quora မှ အမေးအဖြေများကို ဆီလျှော်သလို ဘာသာပြန်ထားပါတယ်။
မူရင်းအမေးအဖြေများကို ဤနေရာတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။